नयाँ पुस्ताले उचाल्दैछ २१ औं संस्करणको विश्वकप !
२०७५ असार २१ बिहीबार ०५:४५:००
काठमाडौं । २१औं संस्करणको विश्वकप फुटबल यसअघिका संस्करणको विश्वकप भन्दा अलि पृथक सावित हुँदै गएको छ । यो पटकको विश्वकपको उपाधि नयाँ पुस्ताले उचाल्ने निश्चित देखिएको छ ।
रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा पुराना खेलाडी बाहिरिइसकेका छन् ।
क्वाटरफाइनलको समीकरण पूरा हुँदासम्म यसअघि विज्ञले गरेको अनुमान गलत सावित मात्रै भएको छैन नयाँ नयाँ तथ्यहरू स्थापित हुँदै गएका छन् ।
क्वाटरफाइनलको खेल शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । विश्वकप फुटबलको क्वाटरफाइनलमा ५ पटकको उपाधि विजेता ब्राजिल, २ पटकको विजेता उरुग्वे, समान १–१ पटकको उपाधि विजेता फ्रान्स र इंग्ल्यान्ड रहेका छन् । त्यस्तै, अहिलेसम्म उपाधिविहीन बेल्जियम, स्वीडेन, क्रोएसिया र आयोजक रसिया रहेका छन् ।
उपाधि यी ८ राष्ट्रमध्ये एक राष्ट्रले जित्ने हो । तर यी आठ टिममध्ये जसले जितेपनि नयाँ पुस्ताले विश्वकपको ट्रफि उचाल्ने छन् ।
पटक–पटक ट्रफि उचाल्ने देश भए पनि नयाँ पुस्ता नै कसरी ?
ब्राजिलले विश्वकप फुटबलको सर्वाधिक ५ पटक ट्रफि जितेको छ । ब्राजिलको यो कीर्तिमान अन्य कुनै राष्ट्रले तोडेका छैनन् । उपाधि उचाल्ने राष्ट्रहरुमध्ये यो विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा ४ टिम मात्रै छन् । ब्राजिलसँगै उरुग्वे, फ्रान्स र इंग्ल्यान्ड ।
पछिल्लोपटक ब्राजिलले सन् २००२ मा जापान र दक्षिण कोरियामा आयोजना गरेको विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो । २००२ मा विश्वकप जित्दाका कुनै पनि खेलाडी पनि जारी विश्वकपमा छैनन् । त्यस्तै, सन् १९९८ मा फ्रान्सले विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो ।
उरुग्वेले सन् १९५० र इंग्ल्यान्डले १९६६ मा विश्वकपको उपाधि उचालेको थियो । अहिले जारी विश्वकपको क्वाटरफाइनलसम्म आईपुग्दा यसअघि विश्वकपको ट्रफि उचाल्ने खेलाडी छैनन् ।
विश्वकपको प्रिक्वाटरफाइनलसम्म भने विश्वकपको उपाधि उचालेका खेलाडी थिए । प्रिक्वाटरफाइनलमा स्पेनले आफ्नो स्थान बनाउँदा सन् २०१० को विश्वकप जिताएका मुख्य र चर्चित खेलाडी थिए । आन्डे«स इनिएस्टा, कप्तान सर्जियो रामोस, जेरार्ड पिके, सर्जियो बुस्क्वाएट्स, डेभिड सिल्भा, पेपे रेइना लगायतका खेलाडीले २०१० को विश्वकप स्पेनलाई जिताएका थिए ।
तिनै खेलाडी जारी विश्वकपको प्रिक्वाटरफाइनलसम्म थिए । तर स्पेन रसियासँग अन्तिम १६ को खेलमा पेनाल्टी सुटआउटमा ४–३ गोलले पराजित भएसँगै विश्वकपको क्वाटरफाइनलदेखि नयाँ पुस्ता रहेका छन् ।
नयाँ पुस्ताका शीर्ष खेलाडी
ह्यारी केन इंग्ल्यान्डका कप्तान हुन् । उनकै नेतृत्वमा इंग्ल्यान्ड रसिया पुगेको थियो । युवा टोली इंग्ल्यान्डले क्वाटरफाइनलसम्मको यात्रा पार गर्दा सबै खेलमा नायक बनेका छन् ह्यारी केन ।
२४ वर्षीय केनको यो पहिलो विश्वकप हो । आफ्नो पहिलो विश्वकपमा नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका केन गोल्डेन बुटको दाबेदार खेलाडी हुन् । उनले जारी विश्वकपमा ६ गोल गरिसकेका छन् । केनले जारी विश्वकपमा ह्याट्रिक गोल पनि गरेका छन् । उनले पानामाविरुद्ध ह्याट्रिक गोल गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा २ वटा मात्रै ह्याट्रिक भएको छ । एउटा उनको नाममा र अर्को पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोको नाममा छ ।
किलियन एमबाप्पे (फ्रान्स)
केलियन एमबाप्पे त्यस्ता फ्रान्सेली युवा खेलाडी हुन् जसको खुट्टामा बल परेपछि विपक्षी टिमका खेलाडी सचेत हुने गर्छन् । अर्जेन्टिनालाई जारी विश्वकपको प्रिक्वाटरफाइनलबाटै बिदाई गर्दा एमबाप्पेले २ गोल गरेका थिए ।
अर्जेन्टिनालाई ४–३ गोलले पराजित गर्दा नायक बनेका थिए, एमबाप्पे । विश्वचर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सीको सपना अधुरै बनाउने एमबाप्पेलाई अर्जेन्टिनाले रोक्न नसक्दा हार ब्यहोरेको थियो । खेलको ६४ र ६८ औं मिनेटमा एम्बाप्पेले गोल गरेका थिए । एमबाप्पेले जारी विश्वकपमा ३ गोल गरिसकेका छन् । १९ वर्षीय एमबाप्पेले सन् २०१७ देखि मात्रै फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेका थिए । उनले सबै भन्दा ठूलो प्रतियोगितामा खेल्दै गरेको यो पहिलो विश्वकप हो ।
यतिबेला उनी चर्चाको शिखरमा छन् । कुनै पनि बेला आफ्नो टिमलाई जित दिलाउने क्षमता राख्ने एमबाप्पे नयाँ पुस्ताका प्रतिभावान खेलाडी हुन् ।